बैङ्कहरू म्युचुअल फण्डमा (४ कात्तिक) | गृहपृष्ठ
Home Uncategorized बैङ्कहरू म्युचुअल फण्डमा (४ कात्तिक)
बैङ्कहरू म्युचुअल फण्डमा (४ कात्तिक)
कात्तिक ३, काठमाडौँ । वाणिज्य बैङ्कहरू सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) प्रवर्द्धनको तयारीमा जुटेका छन् । यसमा सहायक कम्पनी रूपमा मर्चेण्ट बैङ्क खोलेका लक्ष्मी, नबिल र एनएमबी अगाडि छन् । यिनका क्रमशः लक्ष्मी क्यापिटल, नबिल इन्भेष्टमेण्ट र एनएमबी क्यापिटल नामका सहायक कम्पनी छन् । ‘अन्यलाई भन्दा पहिले मर्चेण्ट बैङ्क सहायक कम्पनी भएका वाणिज्य बैङ्कहरूलाई कोष सञ्चालन
गर्न नियमावलीले केही सहज बनाइदिएको छ । यसकारण पनि लक्ष्मी, नबिल र एनएमबी यसमा अगाडि आउन सक्ने देखिन्छ,’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा.शूरवीर पौडयालले भने ।
सामूहिक लगानी कोषसम्बन्धी नियमावली तीन हप्ताअघि आएको हो । नियमावलीले कोष व्यवस्थापन कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १० करोड र सोको प्रवर्द्धकका लागि रू. १ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार मर्चेण्ट बैङ्क सहायक कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न अहिले वाणिज्य बैङ्क र सीमित सङ्ख्याका विकास बैङ्क मात्र योग्य देखिएका छन् । सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापनमा एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरू सहभागितामूलक रूपमा आउन सक्छन् । तर, नेपाली वित्तीय संस्थाहरू यसमा सहभागितामूलकभन्दा छुट्टाछुट्टै रूपमा नै आउने सम्भावना बढिरहेको एक बैङ्कर बताउँछन् ।
मर्चेण्ट बैङ्करले अहिले पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको पनि काम गर्ने अनुमति पाएका छन् । ‘यससँग म्युचुअल फण्ड व्यवस्थापनको प्रकृति मिल्ने भएकाले पनि अहिले मर्चेण्ट बैङ्क सहायक कम्पनी भएका वाणिज्य बैङ्क यसको आन्तरिक तयारीमा जुटेका हुन्,’ लक्ष्मी बैङ्कका फाइनान्स विभाग प्रमुख पीयूष अर्याल भन्छन्, ‘बैङ्कका लागि यो आगामी बजार भएकाले पनि हामी यसको योजनामा छौँ,’ सामूहिक लगानी कोष नया“ व्यावसायिक अवसर भएकाले मर्चेण्ट बैङ्किङ सञ्चालन नगरेका बैङ्क पनि यसमा आउन सक्ने नबिल इन्भेष्टमेण्टका सीईओ प्रवीणरमण पराजुली बताउँछन् । नबिल इन्भेष्टमेण्टले सामूहिक लगानी कोष प्रवर्द्धनमा आवश्यक हुने प्राविधिक जनशक्ति भर्ना प्रक्रियासमेत शुरू गरिसकेको जानकारी उनले दिए ।
‘असोज २५ गतेको वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पनि बैङ्कले म्युचुअल फण्डसम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसअघिको साधारणसभाको एजेण्डामा पनि यस विषयलाई समेटिएको थियो’ उनले भने, ‘बैङ्क अहिले यसको सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा छ । सञ्चालक समितिबाट भने यसबारे निर्णय हुन बाँकी नै छ ।’
एनएमबी बैङ्क पनि सामूहिक लगानी कोष प्रवर्द्धनमा इच्छुक रहेको छ । अहिले नियमावलीको अध्ययन गरिरहेको र सोका आधारमा अगाडि बढ्न आफ्नातर्फबाट ढिलाइ नगर्ने एनएमबीका सीईओ उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘यसका लागि अवधारणासमेत तयार गरेको’ बैङ्कका प्रबन्ध निर्देशक समीर क्षेत्रीले अभियानलाई बताए । ‘अहिले भारतको एक प्रतिष्ठित इन्भेष्टमेण्ट र्फमसँग रणनीतिक साझेदारीका लागि अध्ययन हुँदै छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्न आन्तरिक सफ्टवेयर विकास गर्न पनि गृहकार्य गरिरहेका छौ,’ उनले अभियानसगँ भने ।
एभरेष्ट र एस पनि तयारीमा
एभरेष्ट बैङ्क र एस डेभलपमेण्ट बैङ्क पनि सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनको योजनामा रहेका छन् । एभरेष्टले डेढ वर्षअघि नै सामूहिक लगानी कोष प्रवर्द्धनमा आफू इच्छुक रहेको र यसका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेको र्सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसबेला अन्य कुनै पनि वित्तीय संस्थाले सामूहिक लगानी कोष प्रवर्द्धनको कुरा उठाएका थिएनन् । त्यतिबेला नियमावलीको अभावमा कोष सञ्चालनका लागि अगाडि बढ्न नसकेको एभरेष्टले बताएको छ । ‘नियमावलीले तोकेअनुसारको एभरेष्टले लगभग सबै पूर्वाधार पूरा गरेको छ । त्यसैले अब सकेसम्म चाँडै यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने पूर्वतयारीको क्रममा छौँ’, बैङ्कका सहायक महाप्रबन्धक हुमनाथ गुरुङले भने, ‘बोर्डमा छलफल भई साधारणसभाबाट समेत यो पारित हुनुपर्ने भएकाले आजभोलि नै कोष प्रवर्द्धनमा गइहालिन्छ भन्ने चाँहि होइन । तर, एभरेष्ट यसको योजनामा रहेको भने पहिलेदेखि नै हो ।’
एस डेभलपमेण्ट बैङ्कले पनि आफ्नो सहायक कम्पनी एस क्यापिटललाई कोष व्यवस्थापनमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ । नियमावली आउनुअघि नै कोष प्रवर्द्धनको आन्तरिक गृहकार्यमा सो बैङ्क धेरै अघि बढिसकेको स्रोतले बतायो । ‘शुरूमा नियमावलीको मस्यौदा बन्दा कोष प्रवर्द्धकको चुक्ता पूँजी रू. ५० करोड भए पुग्ने भनिएकाले हामीले कोष प्रवर्द्धनका लागि एक भारतीय कम्पनीसँग प्राविधिक साझेदारीसमेत गरिसकेका थियौँ । तर, नियमावली आउँदा यसलाई रू. १ अर्ब बनाएर लागू गरियो । यो नै हाम्रा लागि बाधक बन्यो । नभए अहिले धितोपत्र बोर्डमा कोष प्रवर्द्धनका लागि निवेदन दिने र कोष सञ्चालन गर्नेमा पनि सबभन्दा पहिलो नै हामी हुन्थ्यौ’, एसका मर्चेण्ट बैङ्किङ तथा ट्रेजरी व्यवस्थापक प्रमोद पाण्डेयले अभियानसँग भने । एस डेभलपमेण्टको चुक्ता पूँजी अहिले रू. ७५ करोड छ । यसलाई बढाएर १ अर्ब पुर्याउने प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ४-५ महिना लाग्ने भएकाले पनि एस तत्कालै भने कोष प्रवर्द्धनमा आउन सम्भव नभएको उनले बताए ।